March 9, 2018 – Thutastar
Comments Off on ခင်ပွန်းသည်မရှိတော့လို့ တက္ကစီမောင်းပြီး မိသားစုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ အမျိုးသမီး
ခင်ပွန်းဆုံးပါးသွားပြီးနောက် မိသားစုကို ထောက်ပံဖို့အတွက် မမိမိပြုံးဟာ တက္ကစီမောင်းသမားဘဝကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်းသစ်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး တခြားအလုပ်လည်း မလုပ်တတ်တာကြောင့် ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် တက္ကစီမောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရသူပါ။ ခုဆို တက္ကစီမောင်းလာတာ ၆ နှစ်နီးပါး ရှိပြီလို့ သူမက ပြောပါတယ်။ “အစကတော့ အမျိုးသမီးတက္ကစီယာဉ်မောင်းဆိုလို့ ကျွန်မ တစ်ယောက်ပဲရှိပြီး ကျန်တာတွေက အမျိုးသားတွေချည်းလိုလို ဆိုတော့ ကျွန်မ အမြဲအထင်သေးခံခဲ့ရတယ်။ တချို့က ကျွန်မ တက္ကစီမောင်းတာကို မနှစ်မြို့ဘူး။ တချို့ကတော့ ဒါက ဝင်ငွေရဖို့အလုပ်လုပ်တာပဲဆိုပြီး ကူညီပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ကားမောင်းကြသူများအဖွဲ့ထဲဝင်လိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်မကို ကူညီပေးမယ့်အဖွဲ့တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်မကိုကူညီကြသလို အားအင်တွေလည်းပေးပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲကူညီကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်မမှာ Uber အသိုက်အဝန်းလေးတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ”
ဒီကနေ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကလေးတွေ မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်
Comments Off on ဒီကနေ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကလေးတွေ မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်
ဒီကနေ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကလေးတွေ မဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်တငိုငို တရီရီဖြစ်နေတော့ မာန်လိုက်ပါသေးတယ် မနက်ဖြန်ဘာသာ အတွက်ဘဲစိတ်နှစ်ပြီး အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားဖို့ပြီးခဲ့တာတွေ မေ့လိုက်ဖို့ ဖျောင်းဖြရတယ် [အဲ့ဒီအချိန်အထိ မေးခွန်းလွှာ မဖတ်ရသေးဘူး] ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာနည်းနည်းတော့ ကြောင်သွားတယ် မေးခွန်းက Grammar ပိုင်းမရောက်ခင်အထိက စာမှန်မှန်လုပ်တဲ့ကလေး Unit 14 ခုလုံးကို ဒိုးလိုမွှေ ရေလိုနှောက်ထားတဲ့ ကလေးတွေအဖို့ မခဲယဉ်းသေးပါဘူး Grammar ပိုင်းက သာမန်အောင်မှတ် မှန်းတဲ့ကလေးတွေ Pattern အလွယ်တွေဘဲကြည့်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေအတွက် အနည်းငယ်ခက်တယ်ဆိုရမယ် Letters & Essays ကတော့ လုံးဝကို Speechless ပါဘဲဂုဏ်ထူးမှန်းထားတဲ့ ကလေးတွေအတွက်တောင်အတော်လေးခက်ခဲတယ်ဆိုရင် သာမန် အောင်မှတ်ရဖို့ ကြိုးစားထားတဲ့ကလေးကတော့ နံပါတ်ထိုး ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့ရုံက လွဲပြီး မစွမ်းသာနိုင်တော့ပါ
အပြာမယ်ဟောင်း မိန်းကလေးက (၇၂)နှစ် အရွယ် သူဌေးကြီးကို ယူပြီးမှ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းရတဲ့ အကြောင်းပြချက်
Comments Off on အပြာမယ်ဟောင်း မိန်းကလေးက (၇၂)နှစ် အရွယ် သူဌေးကြီးကို ယူပြီးမှ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းရတဲ့ အကြောင်းပြချက်
(၇၂)နှစ်သူဌေးကြီးကို ကွာရှင်းပြီး၊ သိုက်တူးသူမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ ထိုင်းအပြာမယ်ဟောင်း တစ်ချိန်က နာမည်ကျော်အပြာမယ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းအပြာမယ် နွန်နက်ဟာ အသက်(၇၂)နှစ်အရွယ် အမေရိကန်သူဌေးကြီးတစ်ဦးနဲ့ (၂၀၁၂ခုနှစ်တုန်းက လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တရားရုံးမှာ ကွာရှင်းခွင့်ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့ရာ တရားရုံးက အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံတဲ့အတွက် ခွာရှင်းခွင့်ကို ဆိုင်းငံထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ သူဌေးကြီး Harold Jennings Nesland ဟာ သူမရဲ့ကွာရှင်းခွင့်ကို လိုက်လျှောခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ဒီလို ကွာရှင်းခွင့်ရပြီးနောက်မှာတော့ သူမဟာ သိုက်တူးသူတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နွန်နက်အနေနဲ့ ဥပဒေအရ ကွာရှင်းစာရိတ် အတော်ရလိုက်လိမ့်မယ်လို့လည်း သတင်းတွေက ရေးသားနေပါတယ်။ နွန်နက်က သူမဟာ သိုက်တူးသူမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံထားပေမယ့်လည်း အခုအခါမှာ လက်ထပ်မယ့်သတို့သားလောင်းတစ်ဦးကို အသည်းအသန်ရှာဖွေနေပြီး အဆိုပါအမျိုးသားမှာ ငွေရေးကြေးရေး ခိုင်မာသူဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ မိမိကိုလက်ထပ်လိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ ငွေရေးကြေးရေး
အမြင်မတော်တဲ့ အသက်ကယ်ပုံစံကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရသည့် ထိုင်းအမျိုးသမီး
Comments Off on အမြင်မတော်တဲ့ အသက်ကယ်ပုံစံကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရသည့် ထိုင်းအမျိုးသမီး
အသက် ၂၀ ရှိ ပါရယာ ဆီနာ အမည်ပြီး နုန်ဂျမ် လို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှအမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသက်ထွက်တော့မယ့်အမျိုးသားတစ်ဦးကို CPR ပုံစံဖြင့် အသက်ကယ်ရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ် အမြင်မတော်တဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် ကူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် အဝေဖန်ခံရကာ တော်တော်လေးနာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ( CPR ဆိုတာ နှလုံးရပ်သွားတဲ့လူတစ်ဦး၏ ရင်ဘတ်ကိုအခေါက်ခေါက်အခါခါဖိညှစ်ပြီး ပါးစပ်မှလေရှုသွင်းလျှက် အသက်ပြန်ရှုလာအောင်လုပ်တဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။) သတင်းအရ ၄င်းလူနာအမျိုးသားဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိ Soi 51 ချန်လမ်းမပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်သွားနေစဉ် ရုတ်တစ်ရက် သွေးခုန်နူန်းရပ်ပြီး သတိလစ်မေ့မျှောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တစ်ရက် ၀က်ရူးတက်ရောဂါတစ်မျိုးခံစားနေတာဖြစ်၍ သူ့မှာရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ ဆီးချိုရောဂါက အဲဒီရောဂါသစ်ကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေတယ်လို့ ဆရာဝန် Withawat Siriprachai မှ လူနာရှိရာဆေးရုံတွင် ပြောဆိုသွားပါတယ်။ အဆိုပါလူနာဟာ အသက် ၆၀ ရှိပြီဖြစ်ပြီး Aran
Comments Off on သမိုင်းထဲက ပျောက်ဆုံးနေသော နာမည်ကျော် ရတနာသိုက်များ
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျောက်မှာ ရတနာသိုက်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ရတနာသိုက်တွေအကြောင်းကြားဖူးမှာပါ ။ ပင်လယ်ထဲမှာ နစ်မြုပ်သွားတဲ့ရတနာသိုက်မျိုး ဒါမှမဟုတ် တောနက်ကြီးထဲမှာ ရဲရင့်တဲ့ ရတနာသိုက်ရှာဖွေသူကိုစောင့်နေတဲ့ရတနာသိုက်တွေလည်းရှိနေတယ် ။ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရတနာသိုက် ၉ ခုကို ရှာဖွေလိုက်ရအောင် … ၁ ပျောက်ဆုံးနေသောရွှေမြို့တော် ပက်တီတီ မြို့တော် လို့ခေါ်တဲ့ အင်ကာဒဏ္ဍာရီထဲက ရွှေမြို့တော်ရဲ့ အကြောင်းကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ ပုံပြင်တစ်ခုပါပဲ ဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့မြို့တော်ဟာ ပီရူးဗီယန် အမေဇုန် တောအုပ်ထဲက နက်ရှိင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေပြီးတော့ နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့အင်ကာ က ဒီရွှေမြို့တော်ကို စောင့်ရှောက်နေပါတယ် ။ ၂ . Lake Guavita ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရတနာသိုက်ဆိုတာက မြို့ဟောင်းတွေတင်မကပါဘူ…Guavita ရေကန်လည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ် ။ ဒေါ်လာ
အိပ်ရာထဲမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်သည့်အချက် (၇) ခု
Comments Off on အိပ်ရာထဲမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်သည့်အချက် (၇) ခု
၁။ မျက်လုံးအကြည့်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဖြစ်တည်မှု ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေကိုပဲ သုံးနေပါစေ၊ ပါတနာအတွက် ဖြစ်တည်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အလကားပါပဲ။ ဒါဆို ဘယ်လိုဖြစ်တည်ပေးရမှာလဲ မေးစရာရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စက အမျိုးသားအများစုအတွက် နားလည်ရခက်နေနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်တည်ပေးတယ်ဆိုတာက သင့်ပါတနာအတွက် ချစ်တင်းနှောနေစဉ် အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာ သူမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို တုံ့ပြန်တာ၊ ညှိနှိုင်းတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ ချစ်တင်းနှောနေချိန်မှာ သင်မျက်နှာကို သူမရဲ့ပုခုံးကိုကျော်ပြီး ဖွက်ထားမယ့်အစား တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ကြည့်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပါတနာကို အာရုံစိုက်နေကြောင်း ပေါ်လွင်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ကြုံခံစားမှုအပေါ်ကို ကိုယ်ရော၊ စိတ်ပါ နှစ်မြုပ်ထားပါ။ သင်နဲ့အတူချစ်ပွဲဝင်နေသူအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် သာယာမှုတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးပါ။ ၂။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အိပ်ယာထဲကို အလေးမ၀ိတ်တုံးတွေ ယူလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေက သင့်ရဲ့ လိင်မှုရေးရာကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်လာ၄၂,၀၀၀ ကိုမင်္ဂလာပွဲလုပ်မယ့်အစားပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
Comments Off on ဒေါ်လာ၄၂,၀၀၀ ကိုမင်္ဂလာပွဲလုပ်မယ့်အစားပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး
Sydney မှာနေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော မိန်းကလေးဟာ မင်္ဂလာဆောင်ရင် သုံးဖို့စုဆောင်းထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၄၂၀၀၀ ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ဘဲ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အဖွဲ့အစည်းအတွက် လှုဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ Angela Tan ဖြစ်ပြီးတော့ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ရက်ကိုတော့ လာမယ့် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှာ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သတို့သားလောင်းနှင့် အတူ မင်္ဂလာပွဲအတွက် လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်ထားရင်း အဲ့ဒီနေ့လေးကို မျှော်နေမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သက်တမ်းကတော့ ရှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းကထဲက စေ့စပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သမီးရည်းစားတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အဆင်မပြေမှု့တွေကတော့ ရှိတက်ကြစမြဲပါဘဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်း အဆင်မပြေမှု့တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် အောက်တိုဘာလထဲကပါဘဲဆိုပြီး Daily
ဖိုးလပြည့်ရဲ့ Music VDO ကို အမိုက်စားရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
Comments Off on ဖိုးလပြည့်ရဲ့ Music VDO ကို အမိုက်စားရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်တစ်ယောက်ကတော့ နေရွှေသွေးအောင်ခေါ် ဖိုးလပြည့်ရဲ့ ခု လေးကြိမ်မြောက် ထွက်ရှိထားတဲ့ သီချင်းကို ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရိုက်ကူးပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ မနေ့ မတ်လ ၉ ရက် ညကပဲ တင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကိုပေါက်က သူရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ဖိုးလပြည့် ၏ Do You Know? Music VDO ရိုက်တုန်းက အမှတ်တရပုံရိပ်များ ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ဝါရင့်ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုပေါက်က ဒါရိုက်တာပိုင်းကို ကူးနေပြီး ခုဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်ကားကို အချို့ကိုလည်း ဖန်တီးထားနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုးလပြည့်ကလည်း ၄ ပုဒ်မြောက် ကာဗာသီချင်းကို ဖန်တီးထားတာ
Comments Off on ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး အထင်သေးတော့မလို့လား?
တန်ဖိုးမထားချင်နေပါလေးစားမှုတော့ရှိပါ – မူလီတစ်ချောင်းဟာ လမ်းမပေါ်မှာ ကျနေရင်တော့ ဘာမှသုံးစားမရတဲ့ အမှိုက်ဖြစ်နေပေမယ့် ဒေါ်လာသန်းချီတန်တဲ့လေယာဉ်တစ်စီးအတွက်တော့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ – ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး အထင်သေးတော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်… သူ့ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိရက်လောက်အောင် တန်ဖိုးထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်တော့ သူ့မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လေ။ – အတော်များများ မလုပ်ချင်တဲ့ စားပွဲထိုးအလုပ်ကို လုပ်နေရတဲ့ ကောင်လေးဆိုပြီး နိုင်ထက်စီးနင်းဆက်ဆံတော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်…သူ့အတွက် ဘေးမသီ ရန်မခဖို့ နေ့စဉ် ဘုရားမှာဆုတောင်းပေးနေတဲ့ အမေတစ်ယောက်တော့ သူ့မှာ ရှိနေနိုင်တယ်လေ။ – သူများတကာအိမ်မှာ အိမ်အကူလုပ်နေရတဲ့ အိမ်ဖော်မိန်းကလေးဆိုပြီး အနိုင်ကျင့်တော့မလို့လား? – မဟုတ်သေးဘူးနော်…သူပြန်ပို့တဲ့ လုပ်အားခနဲ့ ပညာသင်ပြီး တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မောင်နှမတွေ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားတဲ့ ၀ါရင့် မင်းသားကြီး Jo Min Ki
Comments Off on ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားတဲ့ ၀ါရင့် မင်းသားကြီး Jo Min Ki
ကျောင်းသူတချို့ကို လိင်ပို်င်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံယူနေရတဲ့ ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင် Jo Min Ki ဟာ မြေညီထပ် စတိုခန်းထဲမှာ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး သတင်းတွေအရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ Jo Min Ki ဟာ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မသေခင် ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး စိတ်ပျက်စေမိလို့ တောင်းပန်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “Jo Min Ki က သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတိုင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး စိတ်ပျက်စေမိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ကွာလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်” လို့ သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ Jo Min Ki ကို မတ်လ ၉ ရက် ညနေ